ABC Desk – Page2– ABC KHABAR
Author: ABC Desk
भिम राई गाली र छाडा लाग्ने कुरालाई विस्तारी मिलाएर भन्दा खेरी राम्रो र रमाईलो र मन छुने हँदो रहेछ । नेपाली शब्दकोषमा भएका सबै गालीहरुको प्रयोग मिलाएर साहित्यमा राखियो भने […]
January 17, 2019 January 17, 2019 ABC Desk अरुणिमा, बिचार, समाज
बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ गिद्धजातिहरू : कसरी ? नेपालमा सत्ताधारी पार्टीले चुनावमा धेरैमा २५/३० लाख भाेट ल्याएर शासन गर्छन् । मगर, थारू, तामाङ, गुरूङ र राईहरू लाखाैंका संख्यामा टुँडीखेलमा भेला भएर […]
बलराम तिमल्सिना “कमसल” पूँजीको निम्ति र पूँजीपतिको निम्ति घातक उपकरण बनाउँने खेतालो वनेको छ विज्ञान ! युध्द , युध्द र त्यसपछि युध्द अझ त्यसपछि पनि युध्द र अझै युध्द मिशायल […]
November 3, 2018 November 3, 2018 ABC Desk अरुणिमा, कविता
– राजेन्द्र थापा खम्पाहरू त्यसताका उत्तरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरी चीनमाथि गुरिल्ला आक्रमण तथा मुस्ताङ क्षेत्रका नेपाली जनतामाथि अराजक तथा अवैध शासन गर्थे। तिनै अराजक खम्पाहरूको हतियार लिँदै खम्पाहरूलाई गैरसैनिक […]
November 1, 2018 November 2, 2018 ABC Desk बिचार, राजनीति